परिक्षामा कसरी टप हुने ? टप हुने टिप्सहरु | माण्डवी एफएम
परिक्षामा कसरी टप हुने ? टप हुने टिप्सहरु
प्रकाशित मिति : २०७६ आश्विन १६, बिहीबार २१:३८
गणेश प्रसाद घिमिरे अर्घाखाँची
बिद्यार्थीहरुले रटान मारेर पढ्दा पनि असफल ह्ुने गर्दछन । उनीहरुले दिनरात किताबमा मात्र ध्यान दिदा पनि पढेका कुरा बिर्सदा चिन्तित हुने गर्दछन् । सबैका आमा बुवाको चाहाना आफ्ना छोराछोरीले राम्रोसगँ पढोस् । परिक्षामा राम्रो अंक ल्यावोस् भन्ने चाहाना सबै अभिभाबकको हुन्छ तर छोराछोरीले राम्रोसगँ पढ्दा पनि पढेको कुरा याद गर्ने नसक्ने हुन सक्छन् । अभिभाबकले छोराछोरी राम्रोसगँ पढोस भनेर पढ्न दवाद दिन्छन् । तर मनोचिकित्सकका अनुसार बिद्यार्थी सफल तथा टप गराउन उनीहरु माथि दबाव दिनु गलत हुने बताउछन् ।
बिद्यार्थीले बिर्सने हुदाँ परिक्षाको समयमा समस्यामा हुने गर्दछ । त्यसैले परिक्षार्थीलाई परिक्षा टप गर्नका लागी केहि खास कुराहरुमाथि ध्यान दिनु जरुरी छ । आज हामीले परिक्षामा टप हुनका लागी ध्यान दिनुपर्ने केहि टिप्पहरुको बारेमा जानकारी गराउदैछौँ ।
१ थोरै–थोरै समयमा पढ्नु पर्दछ ः–
परिक्षा राम्रोहोस भनेर यसका लागी आमाबावुले आफ्नो छोराछोरीलाई एकपटकमा ४–६ घण्टा पढ्नका लागी दबाव दिनु हुदैन । उसलाई थोरै–थोरै समयमाको अन्तरमा पढ्नका लागी प्रेरित गर्नुपर्दछ। एकैपटक धेरै समयसम्म पढिरहनाले मनमन खिन्न हुन्छ । यसैले परिक्षार्थीको दिमाग पढाईबाट हट्न सक्छ । त्यसैले परिक्षार्थीले एक–एक घण्टाको समय बाडेर पढ्न पर्दछ । परिक्षार्थीलाई एक घण्टा पढिसकेपछि सदस्यहरु संग कुराकानी गर्न दिनु पर्दछ जसले गर्दा छिटो याद हुन्छ र पढाई प्रति पनि दिक्क लाग्दैन ।
२ टेबलकुर्ची नै हुन आर्दशः–
प्रायजसो परिक्षार्थीको ओछ्यानमा पल्टेर वा घुमी–घुमी पढ्ने बानी हुन्छ जुन एकदम गलत हो । परिक्षार्थीलाई सधै टेबलकुर्चीमा बसेर पढ्न लगाउनु पर्दछ । पढ्ने समयमा उसको अवस्था पनि सहि हुनुपर्दछ । आखाँ र किताबको बिचमा कम्तिमा १२ ईन्चको दुरी हुनु पर्दछ । होईन भने आँखा र शरीर चाडै थाक्छ ।
३ ध्यान भङ्ग गर्ने खालका कुराहरुबाट टाढा रहनु पर्दछ ः–
पढ्ने ठाँउमा टेलिभिजन, म्यूजिक सिस्टम ,मोबाईल तथा कम्प्यूटर जस्ता ध्यान भङ्ग गर्ने खालको कुराहरु रहन हुदैन यसले पढाईमा बाधा उत्पन्न गर्दछ ।
४ महत्वपुर्ण कुराहरुलाई अन्डरलाईन गर्ने ः–
परिक्षार्थीलाई पढ्ने समयमा जुन कुरा महत्वपुर्ण छ त्यसलाई मार्करले अन्डरलाईन गनुपर्दछ जसले दो¥याएरको बेलामा त्यसमा बढिभन्दा ध्यान जाओस् ताकि त्यो कुरा दिमागमा राम्ररी बसिरहोस् ।
५ नोट अवश्य बनाउने ः–
परिक्षार्थीलाई सेक्सनको सुरुदेखि नै महत्वपुर्ण कुरा नोट बनाउनु पर्दछ । नोट बनाउनाले परिक्षार्थीलाई लेख्न बानी बस्छ । साथै उसले याद गररेका कुराहरु क्रमबद्ध रुपमा प्रभावकारी ढङ्गले लेख्न आँउछ । प्राय जसो परिक्षार्थीले याद त सबैथोक हुन्छ । तर उसले कुरालाई सहि ढङगले लेख्न नपाएर राम्रो अङक ल्याउनबाट बञ्चित भईहाल्छ ।
६ जरुरी छ दोहो¥याउन ः–
परिक्षार्थीले जुन कुरा आज पढ्छ वा याद गर्छ भोलीपर्सि त्यसलाई अवश्य दोहो¥याउनु पर्दछ । यस्तो हुनु हुदैन किरु परिक्षार्थीले प्रत्येक दिन एउटा नयाँ पाठ पढोस तर पुरानो पाठलाई एक चोटी पनि नदोहा¥योओस् । यसले परिक्षार्थी कुनै पनि कुरा राम्ररी याद राख्न पाउदैन ।
७ आफै लिउ परिक्षा ः–
प्रत्येक शनिबार परिक्षार्थीले ३ घण्टाको समयमा कुनै पनि बिषयको पश्न पत्रलाई हल गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । यसले उसमा पश्न हल गर्ने अभ्यास बढ्छ । उसको लेख्ने गतिमा सुधार आउँछ । साथै लेखावटबाट पनि सुन्दर लाग्दछ ।
८ बढि सुत्ने र उठ्ने बानी ः–
कतिपय परिक्षार्थीले राति ढिलो सम्म पढ्ने र बिहान ढिलोे सम्म सुत्ने बानी हुन्छ । यदि कसैको यस्तो बानी छ भने परिक्षार्थीले ४–५ हप्ता पहिले देखि नै उसले बिहान चाडै उठ्ने र राति चाडै सुत्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । हैन भने बिहानको सत्रमा परिक्षा भएमा उसलाई चाडै उठ्नमा अप्ठारो महशुस हुन्छ ।